रोग र गरीबीले पासाङलाई सडकमा ल्यायो, अशोक जस्तै गायक बन्ने रहर होला त पूरा ? – Dainik Sangalo
रोग र गरीबीले पासाङलाई सडकमा ल्यायो, अशोक जस्तै गायक बन्ने रहर होला त पूरा ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र ०७, २०७८ समय: १३:२८:५६
पाँचथरका ११ बर्षिय पासाङ शेर्पा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । तत्कालै उखान टुक्का मिलाएर गाउन सक्ने कला रहेको छ पासाङ संग । बुवा दावा शेर्पा र आमा संझना शेर्पा जसो तसो गरेर आफ्नो दैनिकि गुजरा गरिरहेका छन् । उनीहरुको आर्थिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर रहेको छ ।
आफु ७ बर्षको हुँदा हर्नियाको अपरेशन गरे पश्चात आफुलाई छहारे रोगले समातेको पासाङको भनाई छ । कक्षा ५ मा अध्ययन गर्दै गरेका यी बालक अहिले काठमाण्डौको बिभिन्न ठाउँमा गीत गाउँदै हिड्ने गर्छन् । उनी भन्छन्– अहिले मलाई नचिन्ने कोही छैन सबैले चिन्नु हुन्छ । कहिले जम्बु डाँडा त कहिले बालुवा खानी गएर गीत गाउँछु , कहिले काँही दिनको हजार पन्ध्र सय हुन्छ ।
त्यसले कपी डट, खानेकुरा तथा औषधी किन्छु । सानालाई भन्दा ठुला लाई साथी बनाउन रुचाउने यी बालकले जननेता मदन भण्डारीको ह त्या काण्डको बारेमा पुरै गीत गाउँछन् । उनी काठमाण्डौ आएको ६ महिना भइसकेको छ ।
बुवाले गिटी बोक्ने काम गर्ने गरेको उनको भनाई छ । आफ्नो रोगको बारेमा बताउँदै उनले भने–म धेरै झिलिक मिलिकमा बस्नु हुदैन । लडि हाल्छु । लडे पछि केही थाहा पाउँदिन । म कति चोटी त गाउँदा गाउँदै ढलेको पनि छु ।
Last Updated on: August 23rd, 2021 at 1:28 pm